Report Belmont ayaa ku dooday in mabda'a Ixtiraamka Dadka ka kooban yahay laba qaybood oo kala duwan: (1) shakhsiyaad waa in loola dhaqmo sida maamul goboleedka iyo (2) dadka madaxbannaani goolkuduwe waa in la xaq u leedahay ilaalin dheeraad ah. Madaxbannaani qiyaastii u dhiganta daynin dadka xakameeyo noloshooda iyaga u gaar ah. In si kale loo dhigo, Ixtiraamka Dadka soo jeedinaya waa in cilmi ma samayn alaab dadka iyagoo aan raali ka. Aadka, taa badalkeed waxay xitaa haddii cilmi-u maleeyo in wixii dhacaya waa dhib lahayn ama xataa faa'iido. Ixtiraamka Dadka keenaysaa in fikirka ah in ay ka qaybgalayaashu-ma cilmi-u hesho in ay go'aan ka.
In dhaqanka, mabda'a Ixtiraamka Dadka ayaa lagu fasiray in ay ka dhigan tahay in cilmi waa in, haddii ay suuragal tahay, oggolaansho la wargeliyey helaan ka qayb-galayaasha. Fikradda asaasiga ah la oggolaansho la wargeliyey waa in ay ka qaybgalayaashu waa in la soo bandhigay macluumaad la xiriira in qaab la fahmi karo oo markaas waa in si iskood ah isku raacaan inay ka qayb qaataan. Mid kasta oo ka shuruudahan ayaa laftiisa sumad u ahaa dood dheeraad ah la taaban karo oo deeq waxbarasho (Manson and O'Neill 2007) , iyo sooci doonaa qaybta dhan dambe ee cutubkan in oggolaansho la wargeliyey.
Dalbashada mabda'a Ixtiraamka Dadka saddexdii tusaalooyin tan iyo bilowgii oo ka mid ah meelaha muhiimka ah cutubka walaac la mid kasta oo iyaga ka mid ah. Xaalad kasta, cilmi-wada yeeleen waxyaalihii qaybgalayaasha-isticmaalo xogta ay (dhadhamiya, Xiriirka, ama Time), loo isticmaalo ay computer si ay u qabtaan hawsha cabirka ah (Encore), ama u diiwaangashan tijaabo ah (ku sadhaysan Dareenka) -without ay ogolaansho ama wacyiga . xadgudub ku ah mabda'a Ixtiraamka Dadka uusan si toos ah uga dhigi waxbarashada, kuwaas oo anshax impermissible; Ixtiraamka Dadka waa mid ka mid ah afar mabda '. Laakiin, fekerayo Ixtiraamka Dadka ma soo jeedin siyaabo qaar ka mid ah in waxbarashada la anshax hormarin karo. Tusaale ahaan, cilmi ku helay yaabaa nooc ka mid ah oggolaansho ka qayb-galayaasha ka hor baadhitaanka bilaabay ama ka dib waxa ay ku dhamaatay, Waan soo noqon doonaa in fursadaha marka waxaan ka hadli oggolaansho la wargeliyey si faahfaahsan hoos ku. Ugu dambeyntii, ethicists cilmi xoogga saaraan in walaac ku saabsan xad-hoosaad dadka kac xataa in ay dhacdo waxbarashada si buuxda benign. Su'aalaha ku saabsan waxyeellooyinka iyo halista dabiici geli tixgelin anshaxa, laakiin waxay guud ahaan waxaa ka hadlay hoos mabda'a Raxmaan, mabda'a ah in waxaan soo socota wax looga qabto.